🥇 ▷ Buugga adeegsadaha ee Samsung moobiillada leh Android Go ayaa la sifeeyaa ✅
Buugga adeegsadaha ee Samsung moobiillada leh Android Go ayaa la sifeeyaa
Internetka Maxaa noqon lahaa buugga adeegsadaha ee Samsung moobiilka ugu horreeya ee leh Android Go ayaa wareegaya.
Thanks to this, waxaan hadda haysan karnaa muuqaal ah waxa kooxdani u ekaan doonto, marka lagu daro faafinta faahfaahin dheeraad ah.
Samsung Galaxy J2 Core?
Tan ugu horreysa waa taas magaca ugu dambeeya ee taleefankani wuxuu noqon lahaa Galaxy J2 Core. Tani waa wax ka soo horjeedda warkii hore halkaas oo loogu yeeri jiray Galaxy J2 Pro.
Haddaba, taxaddar maadaama laga yaabo in khadka ‘Galaxy J2 “ee Kuuriyada Koofureed uu ku ekaado barnaamijka Android Go laftiisa. Sidaa daraadeed, kala duwanaanshahooda kaladuwan ayaa imaan doona (Core, Pro, Prime, iwm.).
Sii wadidda daadinta maanta, Galaxy J2 Core wuxuu soo bandhigi doonaa naqshad taasi kuma dari doono moodada shaashadda dheer.
Iyo ahaanshaha a gadget dhamaadka hoose, maahan wax qariib ah haba yaraatee in la ogaado a hal kambuyuutar dareeraha weyn.
Daboolka laga saari karo
Waxa soo jiidanaya dareenka ayaa ah suurtagalnimada in meesha laga saaro daboolka dambe. Waxaan ka hadlaynaa astaamo aan u kala saari karno sida halis ugu jira in la baabiiyo. Xitaa, xitaa batteriga waa laga saari karaa.
Intaa waxaa sii dheer, Galaxy J2 Core sidoo kale waxay noqon lahayd a casriga Laba-SIM Hybrid.
Tani waxay ka dhigan tahay inay suurtagal noqon karto in la isku dhejiyo laba kaar oo SIM isku mar ah. Ama, haddii kale, ku allabari mid ka mid ah adiga boorar oo door bidaaya MicroSD.
Haddaba, waxa aadan sameyn karin waa in aad isticmaasho dhammaan kuwan isku waqti (2 SIM + MicroSD).
Xiriirka kooxda ayaa muujinaya taas wuxuu la imaan lahaa lakab isbadal dhexmara, wax runtii xiiso u leh inay noqdaan taleefanka Android Go. Laakiin hey, tan ayaa horay loogu sii sheegayay tan iyo bishii hore.
Haddii tani ku dhammaato inay run noqoto, halkan Samsung waxaa laga yaabaa inay ku darto barnaamijyadeeda ‘Galaxy Apps’… Inkasta oo la heli karo helitaanka booska ugu dambeysa ee keydka gudaha ee isticmaaleyaasha. Xusuusnow inaan tixraacno taleefanka lahaan lahaa ROM hooseeya.
Ugu dambeyntiina, adoo tixraacaya ama raadinaya soo daadashada hore, Galaxy J2 Core wuxuu ka koobnaan lahaa a Exynos 7570 processor Quad-core, 1GB oo RAM ah iyo Android 8.1 Oreo (Go Edition) ee dharka.
Xigasho: Telefon Arena